Kitra – «THB ligue des champions 2017» : mitarika ny Cosfa sy ny Hzam Amparafaravola | NewsMada
Kitra – «THB ligue des champions 2017» : mitarika ny Cosfa sy ny Hzam Amparafaravola
Efa eo amin’ny tsontsori-mamba isarahana, ankehitriny, ireo ekipa 12 miatrika ny dingana fifanintsanana, eo amin’ny fiadiana ny ho tompondakan’i Madagasikara, taranja baolina kitra. Mitarika ny Cosfa sy ny Hzam.
Niditra tamin’ny andro fahatelo, omaly alarobia, ny fifanintsanana eo amin’ny fifaninanam-pirenena hiadiana ny ho tompondakan’i Madagasiakara, taranja baolina kitra “THB ligue des champions 2017”. Fihaonana, tanterahina any amin’ny kianja Ampasambazaha, Matsiatra Ambony, sy any amin’ny kianja Rabemananjara, Boeny.
Hatreto aloha, ekipa roa no misongadina ary mitarika vonjimaika : ny Cosfa Analamanga sy ny Hzam Amparafaravola.
Tany Fianarantsoa, nahazo fandresena fanintelony ny Cosfa, rehefa nandresy ny FC Angele avy any Anosy, tamin’ny isa mazava, 4 no ho 1. Efa nitarika tamin’ny isa, 2 no ho 1, ny miaramila teo am-pialan-tsasatra dia. Manana isa sivy hatreto ny Cosfa. Faharoa ny Elgeco Plus, nahazo isa 7, rehefa nisaraka ady sahala, 1 sy 1, tamin’ny RTS Jet Mada Itasy.
Samy eo amin’ny laharana fahatelo kosa ny klioban’Itasy sy ny Top Dom Amoron’i Mania, izay nanilika ny Zanakala FC, tamin’ny isa 2 no ho 0. Faharesena fahatelo ny an’ny Zanakala, izay tsy mbola nahazo isa mihitsy, hatreto.
Any Mahajanga indray, samy manana isa fito ny Hzam Amparafaravola sy ny Cnaps Sport Itasy. Fandresena roa sy ady sahala iray avy ny vitan’ny roa tonta, saingy manantombo eo amin’ny “goal average” ny Hzam. Ny Cnaps, nanilika ny Ajesaia, tamin’ny isa 5 no ho 3, ary 1 no ho 0 kosa ny nandavoan’ny Hzam ny Varatraza. Lavon’ny USSK Diana, tamin’io isa io, ihany koa ny FC Maeva Betsiboka.
Hitohy, rahampitso zoma, ny andro fahefatra ka anisan’ny lalao andrasan’ny rehetra ny fihaonan’ny Zanakala sy ny RTS Jet Mada ary ny an’ny Cosfa sy ny Top Dom.